Umhla My Pet » Yiba Crush? Apha Indlela sibaxelele
sonke sisazi ukuba, mabhabhathane kwi isisu sakho xa ubona kuye bevela kulo lonke igumbi; nangokobuncinane uphefumle xa sivasa elidlulileyo kukutyumza okanye eme ukusondela kuye kwi ime; izinga intliziyo inyuke xa iingalo zakho ndayame omnye komnye kwi movie yokubonela. Ezi zonke iimpawu ukuba uwe umntu. Eqonda ukuba lo kulula, kodwa yokuvumela omnye ukwazi iimvakalelo zakho inzima kakhulu. Nazi iindlela ezimbalwa akathi utyumza wakho ukuba mva ngaphaya ubuhlobo kunye ukufumanisa ukuba bavakalelwa efanayo.
Eyona ndlela ilula kukuba nditsal 'umoya kwaye ayichitheki iimbotyi kuye ngqo. ubeke nje ixesha apho ungafumana nibatyumze wakho yedwa, umxelele ukuba iimvakalelo zakho oyinyaniso kwaye ucele ukuba bavakalelwa efanayo. Uya kuba sibeka yonke phandle kumgca kwaye mhlawumbi usenokuzibeka ngenxa ukulahlwa kwangoko, kodwa eyona ndlela ilula ukufumana yonke isuke esifubeni sakho. Le ndlela kuthatha isixa esikhulu self-esteem, nokuba. Ukuba akukho superhero self-ukuzithemba, mhlawumbi indlela oluchuliweyo bekungayi kuba kuhle.
Ukwandisa Flirt Factor
Indlela elungileyo ukuziva naziphi na umhlobo ukuba ngaphezu umhlobo kukuba ngokucotha flirtier kunye into uthando lwakho. Smiling kakhulu, ngokwenza amaqashiso lweliso zoqhagamshelwano, kukho uqhwanyazo athile kwaye ngokukhawuleza, ikrwaqula labucala xa isicwangciso loluntu ukunika kuzityumza yakho imiqondiso eyayifuna ukuba uyabanika ingqalelo ngaphezu kwabanye. Ukuba mabaqwalasele ngakumbi kukutyumza abanye abantu kubonisa kuzityumza wakho ukuba babethandana kuye okanye.
Fumana Okuninzi Physical
Thatha naliphi na ithuba unako ukufikelela phandle uchukumise kukutyumza. Hayi, Ndiya donít kuthetha engakuniki zabo kwaye kubenza bonke bazive bengakhululekanga. amathuba elula Thabatha ukuchukumisa ngengalo okanye ngesandla njengoko babenokuncokola. Nika kukutyumza ukuncomana xa esithi ndlelantle okanye ebulisa amanye. Khuthazo kubo ngendlela flirty xa uyaqhula nabo Ungayami kwi kufutshane xa bebalisa ibali okanye ihlebo. Ukwanda zoqhagamshelwano physicial yindlela elungileyo ukuzicengezela ongathanda ukuba sisondele kuye okanye, zombini nolwalamano osisilumko, nangokwasemzimbeni.
Yiba Ininzi ukuyityibela zakho
Qala nokumncoma kukutyumza xa befumana iinwele okanye anxibe isinxibo intle. Oku kuya kwenza kuphela kuzityumza wakho azive ngcono ngayo ngokwabo, kodwa ndiya kubazisa ucinga ukuba nomtsalane. izimvo Ukwenza ngathi ìyou abanovakalelo elikhulu enjalo humorî xa kuzityumza wakho wenza iziqhulo okanye ìyou kangaka smartî xa nithetha umba obalulekileyo yindlela elungileyo ukuvumela kuzityumza wakho uyazi ngenene njengazo.
Akukho iqhinga na luchane, kwaye oko zisafuna amacwecwe ngaphandle uxelele kukutyumza iimvakalelo zakho xa donít ukufumana ngamavumba, Ke ababanga nako kukunceda ufumane baliqonde ngcono indlela imxinwa wakho uziva ngawe. Nayo nayiphi na kwezi amaqhinga, kubalulekile ukufunda crushís zakho iimpendulo. Xa esabela izimvo okanye izenzo zakho ngokwazana neentloni okanye ucatshukiswe, amathuba abo donít bavakalelwa efanayo ngawe. Xa esabela ukudlala ukudlala ngaphezulu, zingumqondiso ezintle bambhulayo phezu nawe.